Search Term: သမိုင်းသုတေသနစာတမ်း , 22 results have been searched, Search time: 0.031 seconds , Sorting Option: Match level Published Date Subject Title Author Call No. Borrowed Times Renewal Times Volume No. Sort by: Desc Asc Hide Navigation | Hide trend diagram
ကရင်သမိုင်းသုတေသနစာစုများ တလိုင်းဝေါဟာရသုတေသနစာတမ်း တလိုင်းဝေါဟာရ သုတေသနစာတမ်း မြန်မာစာသုတေသနစာတမ်း သမိုင်းတွင်စေသတည်း သမိုင်းမှတ်တမ်းစာမှတ်တမ်း သမိုင်း - စာနယ်ဇင်း သမိုင်းစက်ဝန်း သမိုင်းထဲကတကောင်း သမိုင်းပုလဲသွယ်
NL Yangon (16)
(၁)။ နိုင်ငံရေးသမားများ (၂)။ မြန်မာနိုင်ငံ-သမိုင်း (1)
မြန်မာစာပေ ; မြစေတီ​ကျောက်စာ ; ပုဂံကျောက်စာ (1)
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း (1)
မွန်စာပေ ၂။ မွန်ဘာသာစကား ၃။ မွန်တိုင်းရင်းသား - လူမှုဘဝနှင့်ဓလေ့ထုံးစံ ၄။ မွန်အနုပညာ၅။ မွန် - သမိုင်း (1)
ရခိုင်ပြည်နယ် - သမိုင်း ; စာတမ်း (1)
အနုပညာ၊ စာတမ်းများ၊ အမျိုးသမီးများ (1)
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ - သမိုင်း (1)
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ- ယဉ်ကျေးမှု၂။ စာတမ်းများ (1)
ဦး ဖေမောင်တင် (2)
]နိုင်ခင်မောင်လေး ... [နှင့်အခြား (1)
ခင်ဝါဆွေ၊ ဒေါ် (ဝါဝါ-အင်းစိန်)၊ တည်းဖြတ်သူ (1)
ချစ်စံ၊ ဒေါက်တာ (1)
ဇော်လင်း၊ ဒေါက်တာ (1)
ညိမ်းညိမ်း၊ ဒေါက်တာ၊ ပါမောက္ခ- (1)
နတ်မောက် ဘုန်းကျော် (1)
နန်းလှိုင်၊ ဒေါက်တာ (1)
နိုင်ခင်မောင်လေး ... [နှင့်အခြား (1)
ပန်းမွှေး၊ မောင် (1)
ဖေမောင်တင် ၊ ဦး (1)
မောင် ပန်းမွှေး (1)
Total3pages First Page <Prev 123 Next > Last Page>>
မြန်မာဝတ္ထုသမိုင်းအစနှင့် သုတေသနစာတမ်းများ Ordering
Author: ဦး ဖေမောင်တင်
Publisher: စိန်ပန်းမြိုင်စာပေ Published Date: 1969
Author: ဖေမောင်တင် ၊ ဦး
Literature Type: Books , Call No.: ၈၉၅.၈ ဖေ ၂၀၁၈/၁၂၉၄
မြန်မာ့လူမှု ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း သုတေသနစာတမ်းများ Ordering
Author: မြန်မာနိုင်ငံ။ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
Publisher: သမိုင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားစာကြည့်တိုက် ဦးစီးဌာန Published Date: 2015
Author: ညိမ်းညိမ်း၊ ဒေါက်တာ၊ ပါမောက္ခ-
Publisher: Wisdom house Published Date: 2016
Literature Type: Books , Call No.: ၈၉၅.၈ ညိမ်း ၂၀၁၆/၈၅၉
Author: မြန်မာနိုင်ငံ။ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ရှေးဟောင်းသုတေသန၊အမျိုးသားပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန
Publisher: ရှေးဟောင်းသုတေသန၊အမျိုးသားပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်ဦးစီးဌာန၊ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန Published Date: 2010
Literature Type: Books , Call No.: ၉၅၉.၁ မြန် ၂၀၁၀/၄၀၆၈
Author: မောင်မောင်တင်၊ ဦး (မဟာဝိဇ္ဇာ)
Publisher: ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန Published Date: ၂၀၀၇
Literature Type: Books , Call No.: 808.02 မောင် ၂၀၀၇/၄၀၆၉
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနစာတမ်းများ(၂၀၁၆-၂၀၁၇)ပညာသင်နှစ် Already borrowed 1 times. Ordering
Publisher: ကနုတ်ပန်းစာပေ Published Date: 2018
Literature Type: Books , Call No.: ၇၀၀.၂ အ ၂၀၁၈/၁၄၈၅
Author: ဇော်လင်း၊ ဒေါက်တာ
Publisher: စံရတီပုံနှိပ်တိုက် Published Date: 2018
Literature Type: Books , Call No.: ၉၅၉. ၁ ၂၀၁၈/၁၁၅၇
Publisher: ပဥ္စဂံစာအုပ်တိုက် Published Date: 2018
Literature Type: Books , Call No.: 959.1 ငြိမ်း ၂၀၁၈/၂၆၃၅